शिल्पा र छबिराज बिचको विवाद सहमति भएको हो ? « Mazzako Online
शिल्पा र छबिराज बिचको विवाद सहमति भएको हो ?
अन्तत: नायिका शिल्पा पोख्रेल र उनका श्रीमान निर्माता छबिराज ओझा बिचको विवाद सहमतिमा टुङिएको छ । बुधबार शिल्पाले घरेलु हिंसाको उजुरी प्रहरीमा दिए सँगै शिल्पा र छबीको घरझगडाले कानुनी रुप लिएको थियो । बिहिबार काठमाडौं प्रहरी परिसर, टेकुमा भएको दुवै पक्षको छलफलपछि पोखरेल र ओझाबीच सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भएर शो विवाद टुङिएको छ ।
कागजमा मिलापत्र गरेर बाहिर निस्केपछी पनि उनिहरु सँगै निस्केनन् । शिल्पा आफुले दाजु भाउजु मानेको फोटोग्राफर बिकास रौनियार र सम्झना उप्रेती रौनियार र आफ्नी आमा सँग फर्कीईन । उनले मिडियामा धेरै बोल्न पनि चाहिनन् । आफुलाई परेको आफुलाई मात्रै थाहा हुन्छ भन्दै उनले घरेलु हिंसा सहनु हुन्न र मैले जसरी आवाज उठाउन नडराउनु भन्ने सन्देश दिईन । अब उनीहरु सङै बस्ने नबस्ने बिषयमा शिल्पाले मुख खोलिनन् । छबिले चाँही फर्केर घर आए खुशी साथ स्वागत गर्ने र मिलेर बस्ने कुरा बताए ।
उनले घरमा भएको सानो झगडालाई राजनीति गरेर प्रहरी र मिडिया सामु ल्याएको भन्दै शिल्पाले दाजु भाउजु मानेको रौनियार दम्पतीलाई घुमाउरो आरोप पनि लगाए । चार आनाको मुर्गीलाई बाह्र आनाको मसला मिलाउने काम भयो भन्दै आफुलाई केही हद सम्म निर्दोष देखाउन खोजे र कानको जाली फुटेको कुरा सरासर गलत भएको भने ।
छबी र शिल्पाको झगडाको कारण के थियो, क-कसले उक्साउन खोजे र अब कुन बाटोमा दुई हिड्छन त्यो त उनीहरु नै जानुन तर, छबिले माफि माग्दै कानुनी उजुरीलाई भने सहमतिमा नै टुङाए ।